Tantsaha anaty aterneto
Hevitra ho an'ny orinasanao manokana: voninkazo mitombo
Ny karazam-boninkazo mahazendana sy aretina azo tsapain-tànana Cinnamon vaovao
Ny fanasitranana fanasitranana ao Gumbo Creek
Ahoana ny fomba hanomanana tincture amin'ny tarhuna ao an-trano ary inona no fampiasana izany?
Ahoana no tsy handravana toeram-pambolena: ny tsiambaratelon'ny fampiroboroboana orkide tsy misy tany ao an-trano
Ho an'ny geranium mamelana, ahoana no hikarakarana azy ao an-trano sy ao amin'ny firenena? Ny fepetra ilaina ho an'ny bozaka
Ny fomba tsara indrindra ahafahana manondraka voatabia voatabia ao an-trano
Dahlia - ilay mpanjakavavy eo amin'ny voninkazo amin'ny baolahin'ny fararano
Fanampiana hanampiana: ahoana no hanamaivana borosy vaovao ao amin'ny mikrofo?
Ahoana no fomba fitandroana akiady amin'ny tantely
Ny karazana voatabia tsotra "Alpatieva 905 a": toetra sy famaritana tomato iray, sarin'ny voankazo mamy, karazana fambolena
- Editor Ny Choice -
Torohevitra mahasoa momba ny fambolena sy fiahiana ny alikaola
Ny karazana malaza indrindra amin'ny kesika wemouth
Ahoana no hananana tsimok'aretina ao anaty vilany
Famaritana sy ny toetran'ny karazana voatabia "Kemerovoz": ireo karazana fikarakarana, tombontsoa ary ny tsy fahampian-tsakafo
Tomaty manana anarana tsara tarehy "Ballerina": sary sy famaritana ny karazany
Ahoana ny fametrahana varavarana fizarana
Inona no atao amin'ny fiterahana amin'ny fametrahana boaty
Fanampiana fanampiny ho an'ny omby
Fitsaboana nentim-paharazana: fanosehana ny tongolo lay vodka, alikaola na divay mena mba hanadiovana ny fanaka
Fihetseham-pitiavana ny begon Mix Mix. Ahoana no fomba hitombo sy hikarakarana voninkazo iray?
Orchid fotsy "Apple Blossom": ahoana no ahitana ny voninkazo
Mihinana voatabia be indrindra isika "Gift Gift of Bebe": famaritana ny karazany sy ny toetrany
Toe-pandehan'ny totozy no fototra ombam-bary ho an'ny fijinjana tomato tsara. Karazana fambolena sy fiahiana
Ahoana no hanasarahana ny holatra ao an-trano: ny fomba mahandro sakafo matsiro indrindra
Ahoana ny fampiasana "Kemifos" ao an-jaridaina: torolàlana ampiasaina
Mianara fomba hampandrosoana holatra
Karazana voaloboka "Lancelot"
Manana endrika pentasaka mitombo ao an-trano
Ilaina maitso - spinach. Torohevitra momba ny fomba handraisana sy hihinana azy tsara
Soso-Kevitra Interesting Lahatsoratra
Nahoana ny raozy no miverina mavo?
Isika rehetra dia tia sy maniry mpiompy mandritra ny trano fahavaratra. Indraindray, ny zavamaniry indraindray dia mihintsana, ny ravina dia manomboka amin'ny fahavaratra. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny antony mahatonga ny ravina haniry mavo ary inona no atao mba hisorohana izany. Fahadisoana fikarakarana Ny fikarakarana ny orinasa dia manana fiantraikany goavana amin'ny fivoarany.
Ny fiterahana dia mamindra orkide amin'ny vilany iray hafa. Mila manondraka ireo zavamaniry sy ny fomba hanaovana izany marina ve aho?
Ny orkide dia afaka ny ho mpanjakavavin'ny zaridaina voninkazo, fa noho izany dia mila ny fikarakarana tsara izy. Tahaka ny toeram-pambolena hafa rehetra, ny orkide dia mila nambolena farafahakeliny indray mandeha isaky ny 2 taona; ity fizika ity dia mety ho fanamby goavana ho an'ny voninkazo sy ny florist ihany. Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hianatra momba ny endriky ny fanondrahana ny orinasa voavolavola isika, na ilaina ny manao izany, ny fomba famonosana ny tany sy ny mendrika izany, ary ny fomba hisorohana ny fahadisoana iombonana.
Vorigea Volga: toetra, endri-javatra
Ireo loharano fahiny tany Mezopotamia, izay mihoatra ny 5000 taona, dia mirakitra ireo tantara voalohany momba ireo voromailala. Ary ny fandevenana Ejiptiana dia mitahiry ireo sisa tavela amin'ireo vorona ireo, toy ny vorona masina. Mandritra ny arivo taona, ny voromailala dia miaina eo akaikin'ny lehilahy ary miova miaraka aminy. Ny tantaran'ilay zana-trondro Ny zana-trondro maromaro ao Volga dia nentin'ireo mpihaza Rosiana (taonjato faha-20) tamin'ny fanombohan'ny taonjato faha-20 tamin'ny nivezivezena tamin'ny voromahailala Syzran vislokryly sy Rzhevsky.
Ny fomba famolavolana sy ny fambolena ny varimbazaha-varimbazaha varieties "Shelf"
Ny trondro "Strait" dia tsy heverina ho zava-baovao ao amin'ireo karazana zaridaina sy tantsaha samihafa, saingy tsy naharesy ny fahaiza-mitarika teo amin'ny fampiasana teknolojian'ny fambolena sarobidy sy ny vokatra tsara indrindra nandritra ny 40 taona mahery. Maro ny famaritana "Erdosta" natao tany Brezila tamin'ny taona 1977 noho ny fambolena karazana varimbazaha "Sivetta" sy "Unduka", ary niely haingana tany amin'ny firenena maro izany: Ukraine, Rosia, Belarosia ary ireo firenena Baltika.
Fitaovana: 10 singa fanampiny amin'ny mpamboly moto
Ny mpamboly matanjaka dia fitaovana maoderina sy maro samihafa, izay ahafahana manamaivana ny asa fambolena karazana. Ampiasaina amin'ny famakiana sy fanalana ny tany izany, ary hanesorana ny ahi-dratsy. Na izany aza, ny fampiasana vondrona fanampiny mpanampy manokana natao ho an'ny mpamboly matanjaka dia mety hanitatra ny habeny sy ny asany.
Alohan'ny fambolena trondro dia ilaina ny mahafantatra ny voka-dratsiny rehetra izay afaka mihinana ny voay. Izany dia hanampy amin'ny fanatanterahana fepetra amin'ny fisorohana amin'ny fomba mahomby sy ara-potoana ary hanome antoka ny hahazoana betsaka. Ticks Jereo ny karazan-tsakafo izay azo jerena ao amin'ny zaridaina, ireo singa fototra izay mamaritra ny bibikely amin'ny trondro, ary ny fomba fitantanana azy ireo.
Fety tsy misy lanjany miaraka amin'ny fahazoany avo - Victoria voaloboka
Parel F1: loko fotsy sady tsy mamolavola fotsy
Ahoana no hanangonana voatabia mandritra ny ririnina, karazana varotra
Ahoana no ahafahana manala vovoka vita amin'ny vovobony eny an-tsefatsefana, esory ny taha-fotsy amin'ny zavamaniry
Nahoana ny orkide no efa nioty fotony ary ahoana no ahafahan'ny zavamaniry averina indray raha maty?
Karazan-tsakafo mena: Karazana, fambolena, fitehirizana ny vokatra ary ny hafainganam-pandehan'ny hafa
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto